काठ्माडौं । उपत्यकामा कोठा लिएर बस्छु, केही सानातिनो काम गरेर खान्छु भन्नेहरुले पछिल्लो समय भोग्नुपरेको एउटा जटिल समस्या भनेको एउटा कोठा नपाउनु हो । सबैतिर फल्याट सिस्टम बनाइएको छ । एउटा सामान्य फल्याटको ठाँउ हेरेर १४–३० हजार रुपैंया भन्छन् । खाली सटर २०–४० लाख रुपैंयासम्म बिक्री हुन्छ । सटरको मासिक भाडा हेर्ने हो भने १० हजारदेखि आठ लाख मासिक तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुरानो, भत्किन लागेका घरहरुको कोठा नै सातदेखि १० हजार रुपैया लिन्छ । अध्यारो, चिसो र केही सेवासुविधा नै नभएको कोठाको पनि यत्रो मूल्य उठाउछन् । पछिल्लो समय चलेको प्रवृत्तिः बरु घर खाली राख्ने । अर्कोले उसको जिब्रोले भनेजति पैसा तिर्ने सहमति नजनाएसम्म घरधनीले कोठाबहालमा दिदैनन् ।
मगेकोजति पैसा तिरेर बस्दा पनि उनीहरुले बहालवालालाई दासीको व्यवहार गर्छन् । बहालमा बस्नेहरु मान्छे नै होइनन्, उनीहरुलाई जे भनेपनि हुन्छ भन्ने मनशाय घरधनीहरुमा देखिएको छ । बहालमा बस्नेले पैसा तिर्छन् तर बिल पाउदैन् । यता, पानी, बत्ती र लुथा सुकाउने ठाँउको समेत उपभोग गर्न पाउदैन् । फोहोरको पैसासमेत सरकारले होइन् घरधनीको जिब्रोले निर्धारण गर्दछ । हामीले खाइनखाई कमाएर ल्याएर घरधनीलाई पोस्ने गरेपनि धरधनीले कहिल्यै राम्रो नजरले हेर्दैनन् । घरधनीबाट बहालमा बस्नेहरु पिडित भएका छन् ।
घाम ताप्नुपप्यो भनेपनि छतमा जान पाइदैन् । पानी पनि नदिने र लुगा सुकाउने ठाँउको व्यवस्था पनि गरिदिएको छैन् । बालबच्चा खेल्ने र सवारीसाधन पार्क गर्ने ठाँउको अभाव उस्तै । दीर्घकालिन रोगीलाई कोठा पाउन अति गाह्रो छ । कोठा पाएपनि बिरामी भएको थाहा पाउनेबित्तिकै निकास्न भन्छन् ।
साच्नै, घरधनीहरुमा मानवता हराएकै हो ? घरधनीहरुको अन्याय र अत्याचार अति नै भइसकेको छ ।
यसको विरोधमा गएर वडा, नगर र प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी दिएपनि सुनुवाई हुदैन् । उल्टै पिडित वर्गलाई नै हप्काएर पठाउने प्रवृत्ति छ । बहालमा बस्नेलाई घरधनीले अंकुशे लगाएको छ । तर, सरकार पनि उनीहरुको अगाडि बोल्दैन् । वडा, महानगर र नगर पनि घरधनीको सामु लम्पसार नै परेको हो ? भन्ने प्रश्न यतिखेर उठेको छ । पुरानालाई निकालेर नयाँलाई मँहगोमा भाडामा लाउने क्रम जारी नै छ । यसको अन्त्य सायदै होलाजस्तो देखिदैन् । सधैं घरधनीको त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यता बहालमा बस्नेहरुको छ । कोठामा कोही पाहुना आइपुगे भने घरधनीहरु चिह्याउन आइपुग्छन् । ढोकाबाहिरका चप्पल गन्न थाल्छन् । तर, मान्छे बसेको ठाँउमा मान्छे आउछन् भनेर उनीहरु बुझदैनन् । कोठामा बस्नेहरु घरधनीहरुसंग आजित भइसकेका छन् । उनीहरुको दादागिरीले सीमा नाघिसकेको छ ।
तर, घरबहाल कर तिर्न नपरोस् भनेर आफन्त बसेको बहाना बनाउछन् । घरधनीलाई ठाँउमा ल्याउने एउटै उपायः घरहरुलाई घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्नुपर्छ । सरकार डराइरहने हो भने हामी ठगिरहनुपर्छ । सरकारको नियमकानुन नमान्ने घरको नामसारी रोकिदिनुपर्छ । सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिनमा पनि रोक लगाउनुपर्छ । यता, थोत्रा घरहरु कोठाबहालमा लगाइएको छ । बस्न मिल्ने–नमिल्ने घर छुट्याउनुपर्छ । सरकारले आँखा चिम्लेर नक्सा पास गरिदियो । तर, नीति नियम बनाउन राज्य असफल भयो । राजस्व उठाउनदेखि सर्वसाधारणलाई सेवासुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन सरकारले सकेन् । सरकारले विकसित मुलुकै सिको गर्नुपर्ने बेला आएको छ । घरजग्गाको अधिकार सरकारकै हातमा हुनुपर्छ ।
आफ्नो निजी सम्पत्ति भन्दैमा बहालमा बस्नेलाई ठग्ने र लुट्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अबको बजेटमा घरभाडा निर्धारण गरिदिनुपर्छ । घरबहाल कर लिने कामको पनि थालनी गरिनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी खटाएर कोठाभाडा उठाउनुपर्छ । कोठाबहाललाई राहत देऊ, सरकार ।
पदमा नपुगुञ्जेल गरिबहरुको नाराबाजी, पुगेपछि भ्रष्ट्राचार गर्ने होडबाजी
अर्थतन्त्र, पर्यटन, लेख रचना/कबिता
पर्यटकलाई ठग्ने क्रम रोकौ !
विवाहको रमझम, पार्टी प्यालेसको ठगीधन्दा धमाधम